Bisharal Assad-Syria, Askarta Mareykanku keenay Manbij, waxaan u aragnaa kuwo Wadankeena Kusooduulay: – Saraar Media
Home›All War›Bisharal Assad-Syria, Askarta Mareykanku keenay Manbij, waxaan u aragnaa kuwo Wadankeena Kusooduulay:
Madaxweyne Bisharal Assad, ayaa sheegay in Askarta Mareykanka ee kusugan gobolka Manbij, ay yihiin kuwo aan sharci ku socon, waana mid sharciga xaduudha ee caalamka kabaxsan, wadan aanu wadankale ciidamadiisa ka warhayn iney soogalayaan, waxaan u arkaa iney fowdo dunida lagu qabsanayo ay tahay: Sidaasna waxuu sheegay Mar telefishinka dalka China PHOENIX TV, uu Wareystay. Oo ay weydiiyeen in Madaxweyne Assad, uu Mareykanku ogeysiiyeen Askarta xaduudaha Manbij ee gobolka Aleppo(xalab) Joogta, waxuu madaxweynuhu ku jawaabay “Maya waxaba namay ogeysiin, ee waxay u soogaleen sidii ciidamo wadanka iyagu iska leh” Bisharal Assad ayaa waxuu kaloo sheegay in Askarta Mareykanku ay soo kordhinayaan , Dagaal iyo dhimasho kale, waayo,? Waxba kamay qaban Iraq, hady ISIS, Ladagaalamayaan, iyo Somalia, Vietnam iyadoo markii hore ay burburiyeen Afghanistan oo ilaa iyo hada xaaladeedu adagtahay.” askarta mareykamku waxay aad ugu fiican yihiin iney dhibaato abuuraan, waa siduu hadalka u dhigaye,
dhinaca kale khamiistii lasoo dhaafay ayaa waxaa Magaalada Manbij ee katirsan gobolka Xalab, soo gaadhay ciidamo mareykanna oo tiradooda tahay 400, oo ku hubeysan Hub aad u culus oo wata gawaadhida gaashaaman, ciidamadan ujeedadooda ayaa waxaa la sheegay inay u socdaan gacana ka geystaan magaalada Raqqa. Ee xaduudka dalka Turkiga, siadaasna waxaa sheegay taliyaha ciidanka US Air Force Colonel John Dorrian, Magaalda Raqqa ayaa 100km ujirta magaalada Manbij. Labada magaalo ayaa waxaa u dhaxeeya ilaa iyo 20 tuulo oo yar-yar, oo ay kamid tahay Al-Bab, oo iyada Ciidamada Turkigu qabsadeen:
Xabaalo Wadareedyo Kamida Xasuuqii Somaliland Loogeystay oo ...
Maskii Dunida Ugu Weynaa Oo Laga Helay ...